Diyaaradda EgyptAir ayaa ku laabatay Qaahira ka dib markii la helay fariin hanjabaad ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda EgyptAir ayaa ku laabatay Qaahira ka dib markii la helay fariin hanjabaad ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Masar • News • Dadka • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Diyaaradda EgyptAir ayaa ku laabatay Qaahira ka dib markii la helay fariin hanjabaad ah.
Diyaarada EgyptAir ee MS 729 ayaa dib ugu laabatay garoonka diyaaradaha ee Qaahira sababo la xiriira fariin hanjabaad ah oo ka timid qof aan la garaneyn oo ku dul haray mid ka mid ah kuraasta diyaaradda.
Diyaarada EgyptAir ee MS729 ayaa ku laabatay gegida dayuuradaha ee Qaahira sababo la xidhiidha fariin hanjabaad ah oo ka timid qof aan la garanayn.
Diyaaradda ayaa ku soo laabatay garoonka oo ay ka duushay 22 daqiiqo kadib markii ay kacday, waxaana ay si nabad ah ku degtay.
Diyaaradda Airbus A220 oo rakaab ah oo ka soo duushay Qaahira kuna socotay Moscow ayaa qeylo dhaan ka muujisay badda Mediterranean-ka.
Diyaaradda EgyptAir MS 729, waxay ka soo duushay Qaahira Moscow, Ruushka, ayaa lagu qasbay inuu ku laabto garoonka diyaaradaha ee Qaahira ka dib markii fariin hanjabaad ah laga helay mid ka mid ah kuraasta qolka weyn.
"Diyaaradda MS 729 waxay soo noqotay fariin hanjabaad ah oo ka timid qof aan la garanayn oo ku hadhay mid ka mid ah kuraasta diyaaradda," ahaa Godey ayaa lagu yiri bayaanka.
"Diyaaraddu waxay ku soo laabatay gegida dayuuradaha ee ay ka dhoofaysay 22 daqiiqo ka dib waxayna si nabad ah u degtay, dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ayaa la qaadayaa."
Diyaaradda Airbus A220 oo rakaab ah oo ka soo duushay Qaahira kuna socotay Moscow qaylo dhaan ka dhawaajisay nus saac ka dib bixitaankeedii, iyada oo mar hore dulmartay badda Mediterranean-ka. Intaa ka dib, diyaaradii waxay dib ugu laabatay garoonka diyaaradaha ee Qaahira.
Sida laga soo xigtay ilo-wareedka shirkadda, shilalka noocan oo kale ah ayaa dhaca dhowr jeer sannadkii. Sida caadiga ah, fariimaha noocaan oo kale ah waxay noqdaan kuwo ku raaxaysanaya.
Si kastaba ha ahaatee, sida uu qabo sharciga shirkadaha diyaaradaha, diyaaraddu waa inay soo degto xaalad kasta.
Marka ay soo degto diyaaradda si taxadar leh ayaa loo eegi jiray iyadoo la raacayo xeerarka badbaadada, rakaabka iyo boorsooyinkooda ayaa la baari jiray, ka dibna waxaa la saarayaa duulimaad kale.
Dr. Taleb Rifai oo baaq deg deg ah u diray wadamada xubnaha ka ah UNWTO...
Iberia Advance Xogta Rakaabka ee Cusub